Ezigbo ezinụlọ Buwalda nwere olile anya iji njem mara mma na 2021 - Thrilltalk.com
Home/Kpamkpam/Ezigbo ezinụlọ Buwalda na-atụ anya inwe ike ịga njem na ihe ọhụrụ na 2021
0 38 Nkeji 1
Ezinụlọ Buwalda abụghị aha a na-amaghị ama na ụwa dị egwu. Ezinụlọ Buwalda dị na ngosi ahụ maka ọgbọ asaa. Site n'ụgbọala na-agba ọsọ gaa na ndị na-agba ọsọ na Buwalda ị kwesịrị ịnọ na Time Machine 'The Coaster' mana ruo ugbu a, ndị na-anya ụgbọ ala enwebeghị ike ịme ngosi Corona jikoro.
Oge igwe 'The Coaster'
Site na coaster ọhụrụ na-agbagharị agbagharị, Buwalda nwere ugbua okpuru isii na ya ogige ntụrụndụ. Nke a na - eme Buwalda otu n’ime ndị kachasị ibu ndị ọrụ na Europe na ubi nke ala coasters. Gị na ndị ezinụlọ ị nwekwara ike ịchọta Euro Coaster, Wild Mouse roller coasters Magic Mouse na Spinning Coaster na ụmụaka na-agba ụta n'ụsọ Crazy Clown na Family Roller Coaster. Na mbụ, na onye ọrụ Ook ebe nkiri dị ka Spinning Coaster XXL, London City Coaster, Crazy Mouse na Big Roller Coaster.
Rgba ọsọ na-ejikarị agba agba. Na-acha odo odo, na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, wdg. "Maka coaster a na-agba gburugburu anyị họọrọ maka isiokwu isiokwu, dị ka burgundy acha ọbara ọbara, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na agba aja aja, nke na-emepụta ikuku dị iche." Ọzọkwa, ụgbọ ndị ahụ anaghị akwụsị na nrụgide ikuku, nke a na-emebu, mana mgbe ha na-agbafe ihe ndọta. Ihe ọzọ a na-eme n’oge a bụ na enwere ike ịchịkwa mma site na ngosipụta.
Na mbu eburu ya n'uche na igwe ohuru ohuru gha enwekwa ugwu elu, ma ewepuwo ihe a n'ihi ugwo di elu. Igwe na-agba ọsọ ugbu a nwere ugwu na-ebuli elu.
Igwe na-agba ọsọ na-agba ọsọ nke 57,6 km / h ma dị elu 13 mita. Trackzọ 430 mita nwere mpaghara 42 site na 20,5 mita. A na-agba ịnyịnya na a mma na-ewe nanị ihe karịrị 2 nkeji.
igwe na-agba okirikiri mma buwalda coaster okpueze onye ọrụ ezinụlọ Kpamkpam Oge Ngwa igwe
Rutte: Ogige ntụrụndụ na zoos meghere ọzọ